ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား စက်တပ် linear actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > linear လျှပ်စစ် Actuator > ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား စက်တပ် linear actuator
ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား စက်တပ် linear actuator
AOX-QL စီးရီး ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား စက်တပ် lတွင်ear actuaသို့r ဖြစ် လျှောက်ထား သို့ fastidious ထိန်းချုပ်မှု auသို့mation အလုပ် တွင် တွင်dustrial ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နှင့် ပေါကျကှဲခွငျး-အထောက်အထား protection.Our ထုတ်ကုန် များမှာ မဟုတ် သာ အဆိုပါ အခင်အရှင် စက်နှင့်ဆိုင်သော တွင်terface, ဒါပေမဲ့ လည်း အဆိုပါ ဝေဖန် တွင်terface တွင် အဆိုပါ ထိန်းချုပ်မှု စနစ်။ အဆိုပါ ခေတ်သစ် AOX-QL စီးရီး ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား စက်တပ် lတွင်ear actuaသို့r ထိန်းချုပ်မှု ယူနစ် တွေ့ဆုံ အဆိုပါ လုံခွုံရေး ဆက်သွယ်ရေး လိုအပ်ချက်များ ၏ အဆိုပါ ယေဘုယျ လယ်ယာ ထိန်းချုပ်မှု စနစ်။ ကှေးနိုငျသော ပစ္စည်းကရိယာ တည်နေရာ နှင့် configuration များ သို့ တှေ့ဆုံ အမျိုးမျိုးသော တွင်stallation လိုအပ်ချက်များကို။
1. ကန့်သတ် switch ကို
စက်မှု, အီလက်ထရောနစ်နှစ်ဆန့်သတ်ချက်။ စက်မှုန့်သတ်ချက်အဆို့, ချိန်ညှိလုံခြုံစိတ်ချရမူကား, အီလက်ထရောနစ်န့်သတ်ချက် switch ကို cam ကထိန်းချုပ်ထားသည်။ တိကျစွာနှင့်အဆင်ပြေအနေအထားသတ်မှတ်မည်။
ယင်းအဆို့ရှင်၏ installation အရွယ်အစားကိုက်ညီမပါဘူးဆိုရင် AOX-QL စီးရီးပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထားမော်တော် linear actuator ထို့နောက်အခြားအဒီဇိုင်းကိုသုံး, နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီ၏ installation အရွယ်အစား။
AOX-QL စီးရီးပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထားမော်တော် linear actuator အသုံးပြုမှု Hybrid ကိုအင်နာလော့တိုက်နယ်နှင့်အတူမြင့်မားတဲ့ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှုနှင့် control panel ထဲကအတူတစ်ခုတည်းသောသင်္ဘောကွန်ပျူတာအပေါင်းတို့, သတ္တု plug-in ကို installation ကိုမွေးစားနေသည်, ထိုမော်တာအပူအရင်းအမြစ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့အကောင်အထည်ဖော်မှုနိုင်အောင် ထိထိရောက်ရောက်အထီးကျန်ဖြစ်ပါသည်, ကိုအလွန်ဆန့်ကျင်နှောင့်ယှက်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် software နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲ၏အပူချိန်ကိုခုခံတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှစ်ပေါင်း 20 ကျော်အဘို့လျှပ်စစ် actuators များထုတ်လုပ်ရာတွင်ပါဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 60,000 လျှပ်စစ် actuators တွေရဲ့နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူ, ရင့်ကျက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများရှိပါတယ်။ အဓိကအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများစက်စင်တာ, CNC တွင်ခုံ, CNC ကြိတ်စက်, CNC တူးဖော်စက်, CNC တူးဖော်စက်, ပလာစမာရေမှုန်ရေမွှားဂဟေဆော်ပစ္စည်းကိရိယာများ, ရေမှုန်ရေမွှားခြောက်သွေ့လိုင်းနှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများ, ကြိတ်, ငြီးငွေ့စရာ, တူးဖော်ခြင်း, ပစ်ကြိတ်ခြင်းနှင့်စက်ကိရိယာသည်အခြားအမျိုးအစားများပါဝင်သည် အဆင့်မြင့်ကိရိယာများအတွက် .AOX စဉ်ဆက်မပြတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု AOX-QL စီးရီးပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထားမော်တော် linear actuator ၏အရည်အသွေးကောင်းအာမခံထားသည့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအပေါ်တင်းကျပ်သောထိန်းချုပ်မှု, နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်တင်းကျပ်သောပြင်ပကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုစံဝယ်ယူအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပြင်ပပေးသွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-QL စီးရီးပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထားမော်တော် linear actuator ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရန်လုံခြုံပြီးတည်ငြိမ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအသင်းတည်ထောင်နိုင်ရန်အတွက်။
ငါတို့သည်သင်တို့၏ AOX-QL စီးရီးပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထားမော်တော် linear actuator သို့မဟုတ်အထုပ်ပေါ်မှာပုံနှိပ်ခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုဂိုသို့မဟုတ် comany နာမကိုအမှီရနိုင်မလား?
မေး: AOX-QL စီးရီးပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထားမော်တော် linear actuator အဘို့သင့် Pack အသေးစိတ်ကိုကဘာလဲ?
hot Tags:: ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား စက်တပ် linear actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်